အသစ်တစ်ခုကိုမြို့သို့မဟုတ်မြို့ကိုရွှေ့ဖို့ကိုဘယ်လို | USAHello | USAHello
USA တွင်, people choose to move toanew city for many reasons. All newcomers have the freedom to move when they choose. ကလူသစ်တစ်ခုအရပျသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အဘို့ဖြစ်၏. It isabig decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.
To help you decide whether moving isagood idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. ဒီနေရာတွင်ရွှေ့မီစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်မေးခွန်းအချို့ရှိပါတယ်:
သင်သည်သင်၏လက်ရှိအိမ်သူအိမ်သား / တိုက်ခန်းထဲမှာပရိဘောဂများနှင့်အခြားပစ္စည်းများရောင်းဖို့လိုအပ်သလား?
အသစ်ကရပ်ရွာထဲတွင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်များမှန်ဆောင်မှုများပေးအကျိုးအမြတ်မဟုတ်သည်ရှိပါသလား? You can use FindHello အသစ်ရဲ့မွို့တှငျအဖှဲ့အစညျးမြားကိုရှာ.
အသစ်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာတူသောရာသီဥတုဆိုတာဘာလဲ? သင်ဤအသစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်အဘို့အဝတ်ရှိသည် Do?
If you are acceptingajob because it pays more, သင်သည်ထိုအသစ်သောမွို့၌အသကျရှငျ၏ကုန်ကျစရိတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြ?
အရွယ်ရောက်ပြီးသူပညာရေးနှင့် ESL သင်တန်းများအသစ်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာရရှိနိုင်ပါ?
သငျသညျသစ်ကိုရပ်ရွာထဲတွင်မိသားစုသို့မဟုတ်မိတ်ဆွေများကိုရှိသည် Do? သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူနေထိုင်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်?
Will you have childcare in the new community? ဒါကြောင့်အဘယျသို့ကုန်ကျမည်?
1) သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်မည်ဆိုလျှင်, သငျသညျအပြောင်းအရွေ့သွားကြသည်ကိုသင်၏အမှုတွဲကိုင်ပြောပြရန်သေချာစေပါ.
2) သင်သည်သင်၏တိုက်ခန်းအပေါ်တစ်ဦးငှားရမ်းရှိပါက, သင်ငှားရမ်းခြင်း၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာသေချာအောင်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းမှာအနည်းဆုံးသင့်ရဲ့အိမ်ရှင်ကပေးရနျလိုအပျ 30 သင့်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသိုက်ပြန်ရနိုင်ရန်အတွက်ရက်ပေါင်းအသိပေးစာ. စာရွက်တစ်ရွက်တွင်, သင်သည်သင်၏အမည်နှင့်ရက်စွဲနှင့်အတူကရွှေ့ခြင်းနှင့်လက်မှတ်ရေးထိုးလိမ့်မည်ဟုရေးရန်.
3) အတူလိပ်စာပုံစံတစ်ခုအပြောင်းအလဲ File အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ ဤပုံစံကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် USCIS ကပို့စရာအားဖြင့်. သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် complete the form online.
4) You also need to change your address with the US post office. သငျသညျသေချာသင်သည်မည်သည့်အရေးကြီးသောစာတမ်းများသို့မဟုတ်မေးလ်လက်ခံရရှိစေရန်ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. You can either use the online form, or you can go toalocal post office and complete the form. If you do it online, you will be charged $1 to prove your ID by usingacredit or debit card. If you do it at the post office, you will need to bring ID with you, such asadriver’s license, but there will be no charge.
5) သငျသညျပရိဘောဂရှိပါကသင်နှင့်အတူဆောင်ကြဉ်းနိုင်ဘူး, ရောင်းဖို့ကြိုးစား. သင်တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်ရောင်းချခြင်းများရှိနိုင်ပါသည်.
6) သငျသညျရွေ့လျားနေကြသည်သောသင်ရာ၌ခန့်ထားပြီဆိုမိတ်ဆွေများကိုပြောပြပါ. သူတို့ကသင့်ကိုကူညီနိုင်သူသစ်ကိုမြို့အတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသိစေခြင်းငှါ,. သူတို့ကိုသင်ကသင်၏ဖုန်းနံပါတ်နှင့် email လိပ်စာပေးပါနှငျ့သငျရွှေ့ပြီးနောက်သင်အကူအညီလိုအမှု၌သူတို့အဘို့အမေးပါသေချာအောင်လုပ်ပါ.
7) ဖြစ်နိုင်လျှင်, သငျသညျအပြောင်းအရွေ့ရှေ့၌သင်တို့အသစ်သောမွို့၌နထေိုငျဖို့နေရာရှာတွေ့. သငျသညျ Craigslist အပေါ်သောအရပ်တို့ကိုမလေ့လာလို့ရပါတယ်. ဒါပေမဲ့, do NOT give anyone money through Craigslist. သငျသညျလူတစ်ဦးအတွက်တိုက်ခန်းတွေ့နိုင်ပါသည်သည်အထိစောင့်ဆိုင်း.
8) If you need help or are not sure what to do, သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေကိုကူညီရန်ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်.
9) If you are receiving any benefits from your state (ထိုကဲ့သို့သောငွေသားအဖြစ်, အစားအစာတံဆိပ်ခေါင်းများ, သို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု), you will have to re-apply for all of these benefits if you move toanew state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.